09/07/2018 - Page 2 sur 4 -
Didy fampiharana ny fifidianana : Tsy afaka manatanteraka fampielezan-kevitra ny mambran’ ny governemanta
09/07/2018 admintriatra 0
Taorian’ny nanambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta ny laharam-pahamehana amin’ireo ny antanan-tohatra ahatongavana amin’ny fifidianana, dia indro fa nivoaka izao ny lalàna fampiharana ireo lalàna mifehy ny fifidianana. Voatanisa ao araka izany ireo fepetra ilaina rehetra mikasika …Tohiny
Hery Rajaonarimampianina niresaka fifidianana : “Tsy tokony ho sodokan’ny endrika ivelany ny mpifidy”
Manohana hatrany ny tena fampandrosoana hita maso sy miantraika amin’ ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina manoloana ny fahatomoran’ny fiavian’ny fifidianana, nambarany fa tsy tokony ho sodokan’ny endrika ivelany ny vahoaka ary tsy tokony …Tohiny
Fanafihana tany Menabe : Lasa ny omby, olona iray maty
Notafihan’ny jiolahy mitam-piadiana maro an’isa indray tao amin’ny fokontany Ankazomanga kaomina Bemanonga distrikan’ny Morondava faritra Menabe, ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 5 ora maraina. Lehilahy iray no lavon’izy ireo ary namoy ny ainy …Tohiny
Maevatanana : Trano 50 tafo nodoran’ny dahalo
Nitrangana fanafihana mitam-piadiana indray tany amin’ny fokontany Andegilava, kaomina Ambalajanakomby, distrikan’ny Maevatanana. Dahalo miisa manodidina ny telopolo lahy nitondra basim-borina sy kalaky ary fitaovam-piadiana mahery vaika no fantatra fa nanafika tany an-toerana. Izay ny zoma …Tohiny
Fanamby no apetraka. Io no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateniny tamin’ny fitokanana ny Ivon-toeram-pamokarana herinaratra Aksaf Power, teny Ambohimanambola, omaly. Araka izany, nanambara ampahibemaso ny Filohan’ny Repoblika tamin’izany fa tetikasa tsy latsaky ny ...Tohiny